♥ ေကာလိပ္ဂ်င္ ေန၀င္း သို႔မဟုတ္ ထာ၀ရ ရွင္သန္ေနမည့္ သူ႔နာမည္ ♥ – ေရႊၿပည္သစ္ မီဒီယာ
♥ ေကာလိပ္ဂ်င္ ေန၀င္း သို႔မဟုတ္ ထာ၀ရ ရွင္သန္ေနမည့္ သူ႔နာမည္ ♥
Posted on January 5, 2019 January 5, 2019 by moezaw
Written by ေကၿမဴး
၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၅း၀၅) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီး တြင္ သူ ကြယ္လြန္ ခဲ့သည္။ သူ ကြယ္လြန္သည့္ သတင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္းသို့ ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားၿပီး ေနာက္ ဆက္လက္၍ ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔ အျပားသို့ ေရာက္ရွိ သြားခဲ့သည္။သူ႔ကို ခ်စ္ခင္ ေလးစားေသာ ျပည္သူတုိ႔သည္ ႏွေမ်ာတသ ၾကသည္။ ေၾကကဲြ ၀မ္းနည္းၾကသည္။ သူ႔အား နာနတ္ေတာ ခရစ္ယာန္ သခ်ဳႋင္းတြင္ ဂူသြင္း သၿဂႋဳဟ္စဥ္က ၾကက္ပ်ံမက် စည္ကားလွေအာင္ သူ႔ကို ခ်စ္ခင္ ေလးစားေသာ ျပည္သူတုိ႔က လုိက္ပါပို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
သူ႔ဘ၀ အစသည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း လြန္းလွသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔တြင္ ဇဲြ၊ လံု႔လ၊ ၀ီရိယဟူသည့္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ၏ အရင္းအႏွီးမ်ား၊ ႐ိုးသား ျဖဴစင္မႈမ်ား၊ စာနာ ေထာက္ထား မႈမ်ား မုန္းသူ မရွိဘဲ ခ်စ္သူသာ ရွိေအာင္ ျပဳမူ ေနထုိင္ ႏုိင္မႈမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ နယ္ပယ္စံုမွ သူလုပ္သမွ် ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့သည္။သူသည္ သူႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ မ်ဳိးဆက္မ်ား သာမက အသစ္ေပၚ ထြန္းေနဆဲ ရွိေသာ မ်ဳိးဆက္တုိင္း အတြက္ အားက်ဖြယ္၊ အတုယူဖြယ္၊ ေလးစားဖြယ္ ေကာင္းလွသူျဖစ္သည္။ေသေသာသူ ၾကာလွ်င္ေမ့ဆိုေသာ္လည္း သူ႔ကို ခ်စ္ခင္ ေလးစားေသာ ျပည္သူမ်ားက ေမ့မရႏုိင္ၾကေသး။
သူကြယ္လြန္သည္မွာ ႏွစ္(၃၀) ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ေကာလိပ္ဂ်င္ေန၀င္းဟူသည့္ သူ႔နာမည္မွာဘယ္ေတာ့မွ ေသမည္ မဟုတ္ဘဲ ထာ၀ရ ရွင္သန္ေနပါလိမ့္မည္။
တခ်ိန္က လူၾကိဳက္သိပ္မ်ားခဲ႔ေသာ မင္းသားၾကီးေကာလိပ္ဂ်င္ေနဝင္း အားအမွတ္တရ အေနနဲ႔သူ၏ အေၾကာင္းေလးအား ျပန္လည္တင္ျပေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
ေကာလိပ္ဂ်င္ေနဝင္း၏ဇနီးမွာ ေဒၚခင္မာလာ ျဖစ္ျပီး….
Written by ကေမြူး
၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ နံနက် (၀၅း၀၅) နာရီတွင် ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး တွင် သူ ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။ သူ ကွယ်လွန်သည့် သတင်းက ရန်ကုန်မြို့ တွင်းသို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး နောက် ဆက်လက်၍ မြန်မာပြည် အနှံ့ အပြားသို့ ရောက်ရှိ သွားခဲ့သည်။သူ့ကို ချစ်ခင် လေးစားသော ပြည်သူတို့သည် နှမျောတသ ကြသည်။ ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းကြသည်။ သူ့အား နာနတ်တော ခရစ်ယာန် သချုႋင်းတွင် ဂူသွင်း သြင်္ဂိုဟ်စဉ်က ကြက်ပျံမကျ စည်ကားလှအောင် သူ့ကို ချစ်ခင် လေးစားသော ပြည်သူတို့က လိုက်ပါပို့ ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
သူ့ဘ၀ အစသည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်း လွန်းလှသည်။ သို့သော် သူ့တွင် ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယဟူသည့် ကြိုးစား အားထုတ်မှု၏ အရင်းအနှီးများ၊ ရိုးသား ဖြူစင်မှုများ၊ စာနာ ထောက်ထား မှုများ မုန်းသူ မရှိဘဲ ချစ်သူသာ ရှိအောင် ပြုမူ နေထိုင် နိုင်မှုများကို ပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့် နယ်ပယ်စုံမှ သူလုပ်သမျှ အောင်မြင်မှု ရခဲ့သည်။သူသည် သူနှင့် ခေတ်ပြိုင် မျိုးဆက်များ သာမက အသစ်ပေါ် ထွန်းနေဆဲ ရှိသော မျိုးဆက်တိုင်း အတွက် အားကျဖွယ်၊ အတုယူဖွယ်၊ လေးစားဖွယ် ကောင်းလှသူဖြစ်သည်။သေသောသူ ကြာလျှင်မေ့ဆိုသော်လည်း သူ့ကို ချစ်ခင် လေးစားသော ပြည်သူများက မေ့မရနိုင်ကြသေး။
ဟင်္သာတမြို့နယ် ညောင်ပင် သာရွာ တွင် ရဲဝန်ထောက် ဦးသက်ဖေနှင့် ဆရာမ ဒေါ်တင်တို့မှ ၁၉၂၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် သူ့ကိုဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ငယ်နာမည်များ ဖြစ်သော ပါပူးနှင့် နေဒွန်း မှာ လူသိများသည်။ ဟင်္သာတမြို့မှ မစ္စတာ ကန်မင်း၊ မစ်ရှင်ကျောင်းတွင် ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ ဘဝပေး အခြေအနေအရ နွားနို့ လှည့်လည် ရောင်းချပြီး ပညာ သင်ကြားခဲ့ရသည်။ ဝါသနာ အလျောက် ဘောလုံး ကိုလည်း ကြိုးစား ကစားခဲ့သည်။ ပညာ တပိုင်းတစနှင့် ကျောင်းမှ နှုတ်ထွက်ပြီး ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော် (ရေ)တွင် သာမန် ရေတပ် သားကလေး ဘဝဖြင့် ဝင်ရောက် ခဲ့သည်။ ရေ တပ်သားလေး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရင်း ဘောလုံးကစားရာမှ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော် (ရေ) လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား ဖြစ်ရုံမျှမက ထူးထူးချွန်ချွန် ကစားနိုင်မှုကြောင့် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား အဖြစ် ရွေးချယ်ခံ ခဲ့ရသည်။
တပ်မတော် (ရေ)တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ပြီး တပ်မတော်ကို ကိုယ်စားပြု ဘောလုံး ကစားရုံ မျှမက တစ်ဘက်က တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင် အောင်လည်း သူက ကြိုးပမ်း အားထုတ်ခဲ့ရာ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ တပ်မတော် (ရေ)မှ နှုတ်ထွက်ပြီး ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်သို့ ဆက်လက် တက်ရောက် ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ် တက်ရောက်စဉ် တက္ကသိုလ် အားကစား အရာရှိ ဦးငြိမ်း၏ စောင့်ရှောက်မှုဖြင့် ဦးငြိမ်းနှင့် အတူ အဆောင်တွင် မှီခို နေထိုင်ပြီး ပညာသင် ကြားခဲ့သည်။
တစ်ဖက်ကလည်း တက္ကသိုလ် ရေကူးကန် ကြီးကြပ်ရေးမှူး တာဝန်ကိုပါသူ ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝမှာပင် တက္ကသိုလ် လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား အဖြစ်သာမက မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား အဖြစ်ပါ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အဖြစ် အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ပြီး ဘောလုံး ကစားခွင့်ရခဲ့သည့် အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်မှ သူ့အား ၁၉၅၆ခုနှစ် အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမား အဖြစ် သတ်မှတ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံကိုယ်စားပြု လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားနှင့် တက္ကသိုလ် လက်ရွေး စင် ဘောလုံးသမားအနေဖြင့် ပညာသင် ကြားခဲ့ရာ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ဘီအေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ဘွဲ့ရပြီးချိန်တွင် မီးရထားဌာနတွင် မီးရ ထားအရာရှိတာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရန် သူဆက်သွယ် ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။
မီးရထားဌာနတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် သူဆက်သွယ် ညှိနှိုင်း နေစဉ်မှာပင် ဇမ္ဗူအေး ရုပ်ရှင်မှ ဒါရိုက်တာ ဦးချင်းစိန်က စာရေးဆရာကြီး ဇဝန၏ အောင်မြင် ကျော်ကြား လှသည့် ကောလိပ်ကျောင်း သားဝတ္ထုအား ကောလိပ်ဂျင်အမည်ဖြင့် ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရန် စီစဉ် နေကြသည်။ ကောလိပ်ကျောင်းသား၏ အဓိက ဇာတ် ဆောင်သိန်းဖေ အဖြစ် ကျော်ကြားဆဲ မင်းသားများကို အသုံး မပြုလိုဘဲ သိန်းဖေ၏ စရိုက်နှင့် အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်သည့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားကိုသာ စိစစ်ရွေး ချယ်ပွဲထုတ်ရန် ရည်ရွယ်သဖြင့် ဒါရိုက်တာ ဦးချင်းစိန်မှ ဦးငြိမ်းအား သင့်လျော်သူ ရှာဖွေပေးရန် အကူအညီ တောင်းခံခဲ့သည်။ ဦးငြိမ်း၏ တိုက်တွန်းအားပေးမှုဖြင့် သရုပ်ဆောင် လုပ်ရန် သူပိုင်းဖြတ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ဦးချင်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဒါရိုက်တာ ဦးချင်းစိန်မှာ သရုပ်ဆောင်သစ်များ ဖြစ်သော အေဝမ်းဝေဇင်၊ မေမြ၊ အေဝမ်း သိန်းဇော်၊ မေလွင်မြင့်အောင်နှင့် မြင့်စိုးတို့အား မွေးထုတ်ခဲ့ ရုံမျှမက ဗိုလ်မြဒင် ရုပ်ရှင်ကားဖြင့် ဇာတ်ပို့ ထွန်းဝေအား ဇာတ်ဆောင် မင်းသား အဖြစ် လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကျော်ကြားစေပြီး အကယ်ဒမီ ပါရစေခဲ့သည့် ဒါရိုက်တာကြီး ဖြစ်သည်။ သူ့အား တွေ့ဆုံပြီးသည်နှင့် မျက်နှာသွင်ပြင်၊ သွားလာ လှုပ်ရှားမှု၊ ပြောဟန် ဆိုဟန်နှင့် သူ့တွင် ကိန်းအောင်းနေသည့် သရုပ်ဆောင်ဗီဇ (Talent) တို့နှင့် ပျော် ပျော်ပါးပါး သွက်သွက် လက်လက်နေတတ်သည့် ကျောင်းသား သိန်းဖေ၏ စရိုက် ကိုက်ညီနေသည်ကို ဒါရိုက်တာ ဦးချင်းစိန်က သိလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဦးချင်းစိန်က သူ့အား ထိုစဉ်က ထင်ရှားနေသော အကယ်ဒမီ ဖိုးပါကြီးကဲ့သို့ ကျွဲကော်မျက်မှန်ကိုလည်း တပ်ဆင် သရုပ်ဆောင် စေခဲ့သည်။
ထို့နောက် စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာ ဆရာ မောင်နေဝင်းနှင့် စာရေးဆရာနှင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ပို့ လုပ်နေသူ တက္ကသိုလ် နေဝင်းတို့ ရှိနှင့်ပြီး ဖြစ်၍ ဘောလုံးသမား နေဝင်း အဖြစ် ကျော်ကြား ပြီး သူ့အမည်ကိုလည်း မပြောင်းလဲလိုတော့၍ နေဝင်း (ဘီအေ) ဟူသည့် သရုပ်ဆောင် အမည်ကို ကင်ပွန်းတပ် ပေးခဲ့သည်။ ကောလိပ်ဂျင် ရုပ်ရှင်ကားတွင် နေဝင်း(ဘီအေ)နှင့် အတူ ထပ်ဆင့် အကယ်ဒမီ မြင့်မြင့်ခင်၊ သိန်းဆွေမြင့် (ယခု ဇာတ်ပို့ ဦးဝင်းဆွေ)၊ ချစ်ဆွေလေးနှင့် ရွှေစင်မေတို့အား ဦးဆောင် သရုပ် ဆောင်စေခဲ့သည်။
ကောလိပ်ဂျင် ရုပ်ရှင်ကားအား ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရုံတင်ခဲ့ရာ ရုံတင်စက ကျော်ကြားဆဲ မင်းသား မဟုတ်ဘဲ မင်းသားသစ် နေဝင်း (ဘီအေ) နှင့် သူ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ကြည့်ပြီး လူမဝင်ခဲ့၊ ဝင်ကြည့်မိသမျှ လူနည်းစု၏ တစ်ဆင့် စကားဖြင့် တဖြည်းဖြည်း လူကြည့် များလာပြီး ဝင်ငွေစံချိန် တင်သည် အထိ လူကြိုက်များခဲ့သည်။ နေဝင်း (ဘီအေ) အစား ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိသတ်ကလည်း သူ့အား ကောလိပ်ဂျင် နေဝင်းဟု ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ကောလိပ်ဂျင်ရုပ်ရှင် ကားမှ သူ့စကား “ကြေပါတယ် မအေးစိန်” မှာလည်း ပြည်သူကြားသို့ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ထိုးဖောက် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ကောလိပ်ဂျင် ရုပ်ရှင်တစ်ကားတည်းဖြင့် ဟာသသရုပ်ဆောင် မင်းသား အဖြစ် ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိသတ်က သူ့အား တခဲနက် အားပေးခဲ့သဖြင့် ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိသတ် ပေးသော ကောလိပ်ဂျင် နေဝင်း အမည်ဖြင့်ပင် ဟာသ ရုပ်ရှင်ကားများ ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးခွင့် ရခဲ့သည်။ ဟာသ သရုပ်ဆောင် မင်းသားအဖြစ် ကျော်ကြား နေသော ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းအား ဇမ္ဗူအေး ရုပ်ရှင်မှ ဒါရိုက်တာ မောင်မောင်သောင်းက မုန်းရုပ်ရှင်ကားဖြင့် တည်တည် ငြိမ်ငြိမ် သဘာ၀ ဇာတ်ရုပ်ကို ပြောင်း၍ သရုပ်ဆောင်စေရာတွင်လည်း အောင်မြင်ခဲ့ ပြန်သည်။ ထို့နောက် ဟာသရုပ်ရှင်ကား များနှင့် သဘာ၀ ရုပ်ရှင်ကားများ အပြင် အချို့ ဒါရိုက်တာများက လှုပ်ရှားမှု (Action) အသားပေး ကားများကိုပါ အခါ အားလျော်စွာ ရိုက်ကူး သရုပ်ဆောင်စေခဲ့ကြသည်။
မန်းသူလေးမို့၊ ချစ်အမွှာ၊ ချစ်ပွေလီ၊ ယောက္ခမကြီးရေးတဲ့ ဖူးစာ အိမ်ထောင်စု၊ သီတာကို ဘယ်သို့ချစ်ရမယ်၊ ရွှေဝါ ချစ်ထုံးရယ်ဖြေ၊ ချစ်သောချစ်သူရယ်၊ မမုန်းလေနဲ့ ငပလီစသော ဟာသကားများ မုန်း၊ မျှော်၊ အဖြေ၊ အကယ်၍သာ ချစ်မြေ၊ မေတ္တာမိုးတပေါက်၊ ဘုရားမှာ တစ်ခါဆုံတယ်။ ပန်းပန်လျက်ပါ၊ ဇာခန်းစီးနောက်ကွယ်မှာ၊ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာ၊ မောင့်မူပိုင်ရှင်၊ သံယောဇဉ်၊မောင်ချစ် နှမချစ်၊ စကားဝါ၊ မတဲ့ အတူနေ၊ စိတ်စေတသိက်၊ တစ်ဦးက စေတနာ တစ်ဦးက မေတ္တာ၊ ဘမှန်ဘဇံ အကြောင်း၊ အကာက အချစ်အနှစ်က မေတ္တာ၊ ပယင်းရောင်၊ အားနွဲ့သူပါရှင်၊ ဆိုက္ကားသမားဘခက်၊ သီတာ ပြုံး၊ သဘင်သည် မဝင်ရ၊ သမီးချော၊ ဘုံပြတ်ဘမောင် စသော သဘာ၀ ရုပ်ရှင်ကားများ မောင် ချစ်တဲ့သူအငိုတိတ်အောင်၊ ကျောက်ဘီလူးနှင့် ပပဝင်း၊ ချွေးနှင့်သွေးနှင့် ရင်းသည့်မြေ၊ သည်တောင်ကို မောင်ဖြိုပါ့မယ်၊ တယ် တညင် စသော လှုပ်ရှားမှု အသားပေး ရုပ်ရှင်ကားများတွင် ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း အမည်ဖြင့်ပင် သူသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကောလိပ်ဂျင် ရုပ်ရှင် ကားမှ စတင်ပြီး ကွယ်လွန်ချိန် အထိ ကျရာဇာတ်ရုပ်တွင် သူ့အဆက် မပြတ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ရုပ်ရှင်ကား နှစ်ရာ နီးပါးရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။
ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင်ကားများ အနက် ဒါရိုက်တာ ခင်စိုး၏ ပယင်းရောင် ရုပ်ရှင်ကားတွင် ဘဝကို နာကျည်း၍ အရက်၏ ကျေးကျွန်ဖြစ်ရသူ အဖြစ် သရုပ် ဆောင်ထူးချွန်မှုကြောင့် ၁၉၆၉ ခုနှစ် အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆုကို လည်းကောင်း၊ ဒါရိုက်တာ သုခ၏ အကာကအချစ် အနှစ်က မေတ္တာတွင် မိတဆိုးသမီးအား သဘောမတူသူနှင့် ပေါင်းဖက်၍ စွန့်ပစ်ပြီး ခါမှ မြေးကလေးအား တိတ်တခိုး ချစ်ရသူ အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ထူးချွန်မှုကြောင့် ၁၉၇၉ ခုနှစ် အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆုကို လည်းကောင်း ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်သမိုင်းတွင် ဇာတ်ဆောင် မင်းသမီး မပါဝင်ဘဲ ရိုက်ကူး ရုံတင်ခဲ့သည့် ရုပ်ရှင်ကားအဖြစ် ဒါရိုက်တာ ဝင်းဦး၏ အတွယ် အတာနှင့် ဒါရိုက်တာခင် စိုး၏ ဆိုက္ကားသမား ဘခက်သာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ဆိုက္ကားသမား ဘခက်တွင် ဇာတ်ဆောင် မင်းသမီးများ မပါဝင်ဘဲ ဇာတ်ပို့များကို သူပင်ဦးဆောင်သွားခဲ့ရာ ကောလိပ် ဂျင်နေ ဝင်း၏ အနုပညာ သတ္တိပင်ဖြစ်ပါသည်။ သဘင်သည် မဝင်ရ ရုပ်ရှင်ကားမှာ သူ ကွယ်လွန်သည်ထိ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့် ရိုက်ကူးပြီးစီးမှု မရှိခဲ့၊ သူကွယ်လွန် သွားသောအခါ လက်ကျန် ဇာတ်ကွက်များတွင် မင်းသား စိန်မြင့်ကို ဆက်လက် သရုပ်ဆောင် စေခဲ့ကြသည်။
မင်းသားနှစ်ဦး ပြောင်းလဲချိန်တွင် ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း၏ ဈာပန သတင်း အား ကြားညှပ်ပြ ခဲ့ကြသည်။ သဘင်သည် မဝင်ရ ရုပ်ရှင်ကားအား နှစ်ချို့ ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သော်လည်း ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိသတ်က သူ့ သံယောဇဉ်ဖြင့် တခဲနက် အားပေးခဲ့ရာ ဝင်ငွေ ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း၊ မြတ်လေး၊ ကြည်ကြည်ဌေးနှင့် ဘေဘီနွဲ့တို့ အားပြိုင် သရုပ်ဆောင်သော ဒါရိုက်တာ ချစ်ခင်၏ ပန်းပန်လျက်ပါ ရုပ်ရှင်ကားမှာ လူကြိုက်များ ဝင်ငွေကောင်းရုံမျှမက ရန်ကုန်မြို့တွင် ရက်ရှည်ပြသမှု စံချိန်တင် ကားအဖြစ် မှတ်တမ်း တင်ခံခဲ့ရပါသည်။
ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းမှာ သူ၏ ချွေးနှဲစာဖြင့် မိုးမြင့် သော်တာ ရုပ်ရှင်ကို တည်ထောင်ပြီး ဒါရိုက်တာ မောင်မိုးသူ၏ တယ်တညင်နှင့် ဒါရိုက်တာ ခင်မောင်ရင်၏ ဘမှန် ဘဇံအကြောင်း ရုပ်ရှင်ကားများကို ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အချို့အောင်မြင် ကျော်ကြား သော မင်းသားများ ကဲ့သို့ ဒါရိုက်တာ မလုပ်ဘဲ သရုပ် ဆောင်သက်သက်သာ လုပ်ခဲ့သည်မှာလည်း ထူးခြားမှုပင်။
၁၉၇၀ ပြည့်လွန် နှစ်များမှ စတင်ပြီး ကက်ဆက် ဇာတ်လမ်းများ ထွန်းကားခဲ့သည်။ ကက်ဆက် ဇာတ်လမ်းများမှာ ကက်ဆက် သီချင်းခွေ များနှင့် အတူ မြို့ပြတွင် မက ကျေးလက်အထိ အင်အား ကြီးမားစွာ ပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗီဒီယို ရုပ်ရှင်ကားများ ထွန်းကားချိန် တွင်မှ ကက်ဆက် ဇာတ်လမ်းများ ဈေးကွက်ပျက် သွားခဲ့သည်။ သူကွယ်လွန်ချိန်မှာ ကက်ဆက် ဇာတ်လမ်းများ ချုပ်ငြိမ်းသွားသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ကက်ဆက် ဇာတ်လမ်းမှာ အသံဖြင့် သရုပ်ဆောင်ပြရခြင်းဖြစ်ရာ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုနှင့် ပြဇာတ်မှာ ကဲ့သို့ မျက်နှာ အမူအရာနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းများကို လှုပ်ရှား မှုကို ပြခွင့်မရပါ။ အသံဖြင့်သာ နားထောင်သူကို ခံစားအောင် စွမ်းဆောင်ရသဖြင့် ခက်ခဲနက်နဲ လှပါသည်။ ကက်ဆက် ဇာတ်လမ်းများ ထုတ်လုပ်မှုအား ကောင်းစဉ်က ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်များ ဇာတ်သဘင် ပညာရှင်များ၊ တေးသံရှင်များနှင့် အနုပညာ ဝါသနာရှင်များပါ အသံဖြင့် သရုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းကို ဝင်ရောက်လုပ် ကိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ အသံဖြင့် သရုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်း အားထုတ်သူများပြားစွာ ပေါ်ထွန်းခဲ့သော်လည်း ပရိသတ်၏ အားပေး လက်ခံမှုကို ဦးဆောင် သရုပ်ဆောင် အဖြစ် သူသာ အပြည့်အ၀ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်မှ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များထိ ဆယ်နှစ်ကာလ ထုတ်လုပ်သမျှ ကက်ဆက် ဇာတ်လမ်း၏ ၇၅%ခန့်တွင် သူသာ သရုပ်ဆောင် ခွင့်ရခဲ့သည်မှာ ထူးခြားလှပါသည်။
သူကွယ်လွန်ပြီးချိန်တွင် ဇနီးသား သမီးများက သူ့အနုပညာ အမွေကို ထိုက် တန်စွာပင် ခံယူပျိုးထောင် နေကြသည်။ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင် မာလာမှ ဒါရိုက်တာ ခိုင်မြတ်အောင် အမည်ခံယူပြီး ခိုင်တို့ ညီအစ်မ၊ ချစ်ရင် မပြေးနဲ့၊ မောင်ခေါ်ရာ လိုက်မှာလား ရုပ်ရှင်များနှင့် ဗီဒီယို ကားများစွာ ကိုမိုးမြင့်သော်တာ ရုပ်ရှင်မှ အောင်မြင်စွာ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ် လျက်ရှိ သည်။ သမီးဖြစ်သူ ဟေမာနေဝင်းမှ စတိရီ ယိုတေး များရော မြန်မာ သံစဉ်တေး များပါ ပိုင်နိုင်စွာ သီဆိုပြီး ကျော်ကြားသော တေးသံရှင်ဘဝကို ခိုင်မာစွာ ရပ်တည် လျက်ရှိသည်။ ပြီးတော့ သားဖြစ်သူ ရာဇာနေဝင်း ကလည်း မိခင်၏ မြေတောင်မြှောက်မှုဖြင့် ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိသတ် လက်ခံအားပေးသော သရုပ်ဆောင်အဖြစ် အဖေ့ ခြေရာကို နင်း၍ ရုပ်ရှင်ကားများနှင့် ဗီဒီယိုကားများ အဆက်မပြတ် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။
သူကွယ်လွန်သည်မှာ နှစ်(၃၀) ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း သူ့လုပ်ရပ်များကြောင့်ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းဟူသည့် သူ့နာမည်မှာဘယ်တော့မှ သေမည် မဟုတ်ဘဲ ထာဝရ ရှင်သန်နေပါလိမ့်မည်။
တချိန်က လူကြိုက်သိပ်များခဲ့သော မင်းသားကြီးကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း အားအမှတ်တရ အနေနဲ့သူ၏ အကြောင်းလေးအား ပြန်လည်တင်ပြပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း၏ဇနီးမှာ ဒေါ်ခင်မာလာ ဖြစ်ပြီး….
တို့ မှာ သူ ၏ သားသမီး လေးယောက် ဖြစ်ပါသည်..။
၂၀၁၈ အတြက္ အေကာင္းဆံုးအမ်ိဳးသမီးဇာတ္ပို႕ဆု ဆန္ကာတင္ အႏုပညာရွင္ (၄) ဦး
ေရရွည္လက္တြဲခဲ့သည့္ ခ်စ္သူႏွင့္သာ အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္လို႔ဆိုတဲ႔ ၀ါဆိုမိုးဦး
ရဲကိုကိုနဲ႔ ျမဴလင္းကိုကို တို႔သားဖႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ၾကည္ႏူးစရာ ပံုရိပ္ေလး
“အမွန္တရားအတြက္ လုပ္လိုက္တာမို ့တရားဥပေဒ ရဲ့ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူမွာပါဆိုတဲ့ သင္းသင္း
Posted in အတၳဳပၸတၱိ, အႏုပညာရပ္ဝန္း
႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယိုသ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးမင္းစိန္ အသက္ (၅၆) ႏွစ္ ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္
ဦးမင္းစိန္ မကြယ္လြန္ခင္ရက္ပိုင္းက က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေျပာျပလာတဲ့ ဦးေအာင္ခိုင္